Daawo Video: Dibad baxyo Ka Dhan ah Maleeshiyaadka Macaawisleyda oo ka dhacay Deegaanka Xaaji Cali. – Shabakadda Amiirnuur
February 10, 2019 4:14 pm by admin Views: 69
Dibad bax ballaaran oo ka dhan ah ciidamada shisheeye iyo maleeshiyaadka Dowladda Federaalka ayaa ka dhacay deegaanka Xaaji Cali ee gobolka Sh/dhexe. Dadka deegaanka ayaa codsaday in DF-ka ay deegaannadooda ka qaaddo maleeshiyaadka burcadda ah ee loo yaqaan macaawisleyda oo ah maleeshiyaad ay dhiseen ciidamada shisheeyaha AMISOM iyo siyaasiyiin katirsan dowladda Federaalka.
Waxgaradka iyo Nabadoonnada Beesha Cabdalla Caroone ee degta gobolka dhexe oo dibad baxa ka hadlay ayaa sheegay in maleeshiyaadka Burcadda ah ee Macaawisleyda loogu yeero ujeedka laga leeyahay ay tahay in shacabka lagu dhibaateeyo waxayna ballan qaadeen in deegaannadooda ay ka saari doonaan maleeshiyaadkan oo dhibaato uhorseeday dadka deegaanka.
Beesha Cabdalla Caroone waxay ballan qaaday in maleeshiyaadkan ay ka saarayso deegaanada ay degto oo kala ah Xaruur, Xaaji Cali deegaanka Ceel Xarar, degaanka Bursha shiikh deganka iyo deegaanno kale.
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa horay maleeshiyaadkan uga sifaysay deegaanno ku teedsan degmada Cadale waxaana kamid ahaa Ceel Muluq iyo Wargaadhi.
Halkan ka degso Video ku saabsan dibad baxa ka dhacay deegaanka Xaaji Cali ama hoos ka Daawo